Kuvhota kunotanga pane Debian kutanga masisitimu | Linux Vakapindwa muropa
Kuvhota kunotanga pamatanho ekutanga eDebian
Mwedzi mishoma yapfuura pano mu blog tinogovana nhau nezve hurukuro izvo zvakatorwa nevagadziri Debian kana kutsigira akawanda ekutanga masystem zvingave sarudzo. Kubva izvi kwakakonzerwa nekusabvumirana pamusoro pekuendeswa kwepakeji yehunyanzvi (Kana iwe uchida kuverenga iyo noti, iwe unogona kuita mune iyi link).
Uye ikozvino, kutanga kwevhoti yakajairika kwakaziviswa yevanogadzira projekiti kusarudza pamusoro pekuti sisitimu inotsigira akawanda ekutanga masystem, iyo ichatara iyo yekuwedzera mutemo weprojekiti maererano nekusunga kune systemd, tsigiro yemamwe maitiro ekutanga masisitimu uye kudyidzana nekutora kwakapihwa izvo zvisingashandise systemd.
Mwedzi mishoma yapfuura, mushure mematambudziko nekubatanidzwa kweiyo elogind package (inodikanwa kuti GNOME ishande isina systemd) mubazi rekuyedza nekuda kwekukonana ne libsystemd, mutungamiri wechirongwa cheDebian akabvunza mubvunzo zvakare, sezvo vagadziri vakatadza kubvumirana uye kutaurirana kwavo kwakava kupokana uye kumira
Vhoti yazvino inobvumidza mutemo kupfuudza pane akawanda masisitimu ekutanga uye kana chinhu icho chinomanikidza kutsigira mamwe masystem chikakunda, vanochengeta havazokwanise kufuratira kana kunonoka matambudziko akadaro.
Mushure mekukurukura nhatu nhatu dzekuvhota pakutanga yakataurwa nemutungamiri weprojekiti, nhamba yesarudzo yakawedzerwa kusvika sere.
Kana uchivhota, zvinhu zvakawanda zvinobvumidzwa kusarudzwa panguva imwe chete iine kupatsanurwa kwezvinhu zvakasarudzwa nedanho rekusarudza. Vanenge chiuru chevagadziri vanotora chikamu mukuchengetedza kwepakeji uye rutsigiro rwezvivakwa vane mvumo yekuvhota.
Pakati pesarudzo dzakataurwa, inosimbiswa:
Iko kukoshesa kuri pa systemd. Kupa rutsigiro rweimwe nzira yekutanga masisitimu haisi yekutanga, asi zvinyorwa zvekutanga zveaya masisitimu zvinogona kusunganidzwa.
Tsigiro yemhando dzakasiyana dzekutanga masisitimu uye kugona kubhowa Debian pane asiri-systemd masisitimu.
Kutanga masevhisi, mapakeji anofanirwa kusanganisira ekutanga zvinyorwa.
Systemd ichiri kusarudzika, asi kugona kuchengetedza mamwe marongero ekutanga masisitimu anoramba aripo. Technologies, senge elogind, iyo inokutendera iwe kumhanyisa system-yakasungwa kunyorera mune dzimwe nharaunda dzinoonekwa dzakakosha. Mapakeji anogona kusanganisira init mafaera emamwe masisitimu.
Tsigiro yemasisitimu asingashandise systemd, asi pasina kuita shanduko dzinokanganisa budiriro. Ivo vanogadzira vanobvumirana kutsigira akawanda ekutanga masisitimu eramangwana rinotarisirwa, asi zvakare vanoona zvichidikanwa kuti vashande kunatsiridza systemd rutsigiro. Kubudirira nekuchengetedza mhinduro dzakananga kunofanirwa kuitwa nenharaunda dzinofarira mhinduro dzakadai, asi vamwe vanochengetedza vanofanirwa kubatsira nekupa rubatsiro mukugadzirisa matambudziko kana zvichidiwa.
Tsigiro yekutakurika, pasina kuita shanduko dzinokanganisa kukura. Kutakurika pakati peapuratifomu ehurdware uye masaga esoftware ibasa rakakosha uye kusangana kweimwe nzira matekinoroji kunogamuchirwa, kunyangwe kana iwo maonero epasirese evakagadziri ayo akasiyana nemaonero akafanana.
Chinjana rutsigiro rweakawanda ekutanga masisitimu kune chikamu cheanosungirwa. Kupa kugona kumhanyisa Debian neabootstrap masisitimu kunze kweiyo systemd inoramba ichiita mutsauko kuchirongwa. Pakeji yega yega inofanirwa kushanda ne pid1 vanobata vamwe kunze kweiyo systemd, kunze kwekunge iyo software inosanganisirwa mupakeji yakagadzirirwa kushanda ne systemd chete uye hapana rutsigiro rwekutangisa pasina systemd (kusavapo kweinit zvinyorwa hakufungidzirwe kwekushanda ne chete systemd).
Tsigiro yekutakurika uye kuita kwakawanda. Iwo masisitimu akajairika anoenderana zvizere nendima yechishanu, asi zvine chekuita nema systemd uye ekutanga masystem, hapana zvakasarudzika zvinodiwa zvinoitwa kana zvisungo zvinoiswa kune vanogadzira. Vagadziri vanokurudzirwa kuti vafunge zvinodiwa nevamwe, vagadzirise, uye vawane mhinduro dzakajairika dzinogutsa kumapati mazhinji.
Kuvhota kunogara kusvika Zvita 27 zvabatanidzwa, mhedzisiro ichaziviswa muna Zvita 28. Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo, unogona kutarisa iro rekutanga bhuku Mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Kuvhota kunotanga pamatanho ekutanga eDebian
Zvita 28, zuva rakaipa kuti utiudze nhau nezve maitirwo akaitwa vhoti xD
Izvo zvakapusa kuti Debian anofanirwa kuvhota kuti aone kana ivo vakagadzwa nehurongwa, zvakapesana zvachose nehuzivi hwemahara software, hapafanire kuve nekusahadzika kuti mushandisi anofanirwa kubvumidzwa kusarudza kuti ndeipi mhando yekutanga yaanoda kushandisa.
Pindura ku debianit_1
ZeroCleare: APT34 uye xHunt data erasure malware
katsi: haisi katsi, ndeye concatenator